Ivo Vana Cobblers Havana Shangu | Martech Zone
Chipiri, January 26, 2010 Chipiri, Gunyana 1, 2015 Douglas Karr
Nezuro ndakasangana nenyanzvi yekutengesa muno mutown. Wakave musangano wakanaka uye ndakanyatsokoshesa mhinduro dzakaomarara dzandakatambira nezvesaiti yangu yemubatanidzwa. Zvichitaurwa zviri nyore, ini ndaive ndaisa chaiyo isingafadzi peji resaiti mwedzi 6 yapfuura uye handina kana kumbosvika pakuichinja.
Ini ndakatove nebasa rakakura rakaitwa nerubatsiro rwaMark Ballard pane imwe saiti… kumhanya nemumwe mukuru mumiririri iStockphoto mifananidzo. Zvaive zvichishamisa - dai ndakambove nenguva yekuzvipedza.
Chokwadi ndechekuti, handina chokwadi chekuti ndicha nokusingaperi wana nguva yekuipedza. Saka… ndakabiridzira ndikawana yakanakisa theme yandakakwanisa kutenga nekugadzirisa mune imwe nyaya yemaawa. Yakandichengeta kusvika kuma4 mangwanani ano, asi saiti nyowani iri nyore, kusvika padanho, uye inopa ruzivo rwese rwumwe munhu nezve izvo zvazviri Highbridge anoita.
Ini ndakatyora mumwe wemitemo yangu dhizaini - ndichiisa zvirimo nefonti chena pane yakasviba kumashure. Izvo zvinoita kuti zvinyanye kuoma kugaya; zvisinei, ini zvese ndezve glitz ine ino saiti uye kwete kunyatso tarisa pane yekuchengetedza kwevashanyi zvakanyanya. Iyi peji peji saiti yakasarudzika (ita shuwa yekufamba uye tinya kuburikidza neshumiro chikamu).
Pachave nechikamu chevadyidzani munguva pfupi iri kutevera sezvo iri ruzhinji rwebhizinesi rangu zano. Ndizivise kuti unozvida sei kusvika parizvino, zvakadaro!